Nyora iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.1.1 nekuvandudza nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation yaburitsa vhezheni yekuverenga bug yeiyo ichangoburitswa Hofisi package, Hofisi yemahara 6.1.1.
Libreoffice vhezheni 6.1.x, inoitirwa vatangi vekutanga uye vanofarira vane kuravira kwekuvandudza. MuLibreoffice 6.1.1, ivo vanogadzira vakabvisa dzakatenderedza zana nemakumi mashanu mabugs nekusawirirana, huwandu hwakakosha uchienzaniswa neshanduro 150 yakaburitswa muna Nyamavhuvhu
Iyo Foundation haina kukurudzira kuti vashandisi vekambani vashandise iyi vhezheni uye pachinzvimbo vanokurudzira vhezheni 6.0.x. Kune vekupedzisira, kune zvakare yakawedzerwa rutsigiro kubva kuDocument Foundation nhengo.
LibreOffice ine simba rese-mu-rimwe hofisi suite iyo inosanganisa chero zvese zvaunoda kuti uwedzere kufambiswa kwemabasa. Portable vhezheni inowanikwawo.
Iyo inosanganisa akati wandei kunyorera, kusanganisira Munyori, izwi processor, karukureta, shanduro yespredishiti, Impress, injini yekuratidzira, Dhirowa, inova iyo yekudhirowa uye flowchart application, Base, dhatabhesi uye dhatabhesi pasina hurema uye Math ekugadzirisa math. Unogona kugadzira mafaera eHTML, matafura, nezvimwe. nyore, uye pasuru ichashandawo neODF (OpenDocument fomati).
LibreOffice mashandiro inogona zvakare kuwedzerwa nema plugins kana ekuwedzera.
LibreOffice 6.1 yakagadziridzwa pamwedzi mitanhatu yapfuura uye inouya nezvinhu zvitsva senge yakavandudzwa manejimendi manejimendi mashandiro ayo ari kukurumidza uye kutsetseka, kunyanya pakuvhura magwaro akagadzirwa muMicrosoft Office.
1 Nezve kuburitswa kutsva uku
2 Maitiro ekuisa LibreOffice 6.1.1 paLinux?
Nezve kuburitswa kutsva uku
Wechipiri wekuburitsa mukwikwidzi waGunyana 11, 2018 'abviswa kubva mukupedzisira vhezheni yeLibreOffice 6.1.1' ndizvo zvakaziviswa naItalo Vignoli.
Iyo vhezheni nyowani yakapihwa neThe Document Foundation (TDF) zvinoenderana neshejendi rekuburitsa Iyo inouya nenhamba yakakosha yezvinhu zvitsva uye zvakagadziriswa maficha.
Iyo nyowani icon theme yeWindows yakavakirwa paMicrosoft's icon dhizaini mirayiridzofuti iyo nyowani vhezheni inouya neColibre Inosanganisira yakazara yakazara giraidhi maneja uye inopa inokurumidza, inotsvedza uye yakagadzirwazve kugadzirisa mufananidzo.
Vignoli inokumbira vashandisi veLibreOffice nenhengo dzemunharaunda kuti vape kuLibreOffice, saka iwe unofanirwa kuziva nezve yakadzama yekuisa mirau yezvikamu zvakasiyana uye nekuyeuchidzwa kuti zviputi zvine chekuita nekukweva zvinogona kutaurwa kuburikidza neBugzilla.
Unogona kudzokorora chiziviso chekuburitsa kuti udzidze zvakawanda nezve LibreOffice 6.1.1.
Iyo LibreOffice 6.1 kuburitsa kutenderera ichaenderera kupera kwemwedzi pamwe neyechipiri pa-nguva kuburitswa, LibreOffice 6.1.2, iyo inofanirwa kuunza yakatowanda kugadziriswa uye kudzokorodza muzvinhu zvese zvehofisi suite.
Kunyangwe iyo Iyo Gwaro Sisekelo ichiri kukurudzira iyo nyowani LibreOffice 6.1.1 dzakateerana dzevashandisi vemberi chete. Kunyangwe pasina chinhu chinokutadzisa iwe kuwana yazvino vhezheni uye kuiisa pane yako wega komputa.
FreeOffice 6.1.1 yave kuwanikwa kurodha pasi yeLinux, MacOS uye Windows anoshanda masisitimu.
Maitiro ekuisa LibreOffice 6.1.1 paLinux?
Kugona kuisa iyi nyowani vhezheni yeiyi hofisi suite pane edu masisitimu Ivo vanofanirwa kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi.
Kuti ugadzire iyi nyowani vhezheni yeLibreOffice Izvo zvinodikanwa kuti uende kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana iyo deb kana rpm yekuisa mapakeji. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Saka zve avo vanove vashandisi veDebian, Ubuntu, Linux Mint kana chero sisitimu yakavakirwa kana yakabva kune idzi unofanirwa kurodha pasi reDEB.
Kamwe kurodha pasi kwaitwa, ivo vanongofanirwa kuvhura iyo yakadzingwa faira uye gadza iyo pasuru mukati mekodhi, izvi zvinogona kuitwa nemirairo inotevera:
Mune mamiriro ehurongwa hwakavakirwa pa Fedora, CentOS, RHEL kana chero chinobva pane izvi chinofanira kurodha pasi iyo RPM package.
Nenzira imwecheteyo, vanofanirwa kuvhura pasuru yakadzingwa kuti vaise iyo RPM package mukati mefaira ne:
Para kumwe kugovera kwese kunogona kuisa nerubatsiro rweSnap, ivo vanongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nyora iyo nyowani vhezheni yeLibreOffice 6.1.1 nekuvandudza nyowani
Pane chero munhu anoziva kana LibreOffice inotsigira kuwanda-mushandisi kugadzirisa gwaro pamusoro pemambure? (Rudzi rwekufanana kana iwe uchigovana gwaro muGoogle Docs yekugadzirisa)